Hayi, i-iPhone endala ayicothisi nge-iOS 11 | IPhone iindaba
Hayi, ii-iPhones ezindala azicothisi kwi-iOS 11
ULuis Padilla | | iOS 11, Izaziso
Kwenzeka minyaka le emva kokukhutshwa kwenguqulelo entsha ye-iOS: abasebenzisi abahlaziya isikhalazo malunga nengozi, ukucotha kunye nendlela ubomi bebhetri obuncinci obuhlala ngayo. Izikhalazo malunga nokuba iApple izishiya njani izixhobo ezindala ngasemva "kokunyanzela" abasebenzisi ukuba bahlaziye ii-iPhones zabo eziphindaphindayo kwiwebhuNgelixa abanye begcina ukuba ii-iPhones zabo zisebenza kakuhle ngaphandle kwengxaki.
Ngubani onesizathu? Ngaba kuyinyani ukuba iApple yenza ii-iPhones zayo ezindala zenze kakubi ngokuhlaziya ukuze abantu banyanzelwe ukuba batshintshe ii-iPhones? Ngaba kukhona ukuphelelwa lixesha? Isifundo esipapashwe yi-Futuremark siyayiphika yonke le nto ngokuqinisekisa ukuba uhlaziyo lugcina i-iPhone isebenza ngokufanelekileyo kwaye ingqina kuthi ngovavanyo olwenziwe ngaphezulu kweenyanga.
I-futuremark inesicelo sokuba iVenkile ye App esenza iimvavanyo zentsebenzo kwi-iPhone yethu, ebizwa ngokuba yi-3DMark. Uvavanyo lwenziwa kwinqanaba le-GPU (iigrafiki) kunye ne-CPU (iprosesa), kwaye iinyanga beqokelela ulwazi kubasebenzisi abenze iimvavanyo kwiimodeli ezahlukeneyo ze-iPhone, ukusuka kwi-5 ukuya kwi-7. Lonke ulwazi lubonakalisiwe kwiigrafu apho sinokubona inyanga nenyanga amanqaku aphakathi afunyenwe kuvavanyo olwenziwe: ezingwevu iziphumo ze-iOS 9, ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezo ze-iOS 10 kunye ne-orenji zezo ze-iOS 11. Njengoko ubona kwimeko ye-iPhone 5s, eyona modeli indala ifumene i-iOS 11, umahluko mncinci, thina Ungatsho nokuba yeyiphi ephezulu ngokuzoba nge-iOS 11 kunokuba ibinjalo nge-iOS 9.
Kwimeko ye-iPhone 66, ukuphuculwa komzobo kuyabonakala nge-iOS 11 xa kuthelekiswa ne-iOS 9 kunye ne-iOS 10, kwaye kuyinyani ukuba nge-iOS 11 iimvavanyo ze-CPU zimbi kakhulu kune-iOS 9, kodwa azitshintshi ngokuthelekiswa neenguqulelo zamva nje ye-iOS 10.
Kwi-iPhone 6s umahluko mncinci, kwaye nangona i-iOS 10 yayiluphuculo lokuqala kuzo zombini i-GPU kunye ne-CPU, kamva yehla ngandlela thile kwaye ukufika kwe-iOS 11 inqanaba lihleli lingatshintshanga.
Okokugqibela, i-iPhone 7 iphucule ukusebenza kwemizobo xa kuthelekiswa neenguqulelo zamva nje ze-iOS 10, kwaye i-CPU ihlala ingatshintshanga ngokuthelekiswa nezo nguqulelo zinye.. Ngokuqinisekileyo sijamelene neenjongo kunye nedatha engenakulinganiswaKe kukho ukubonakala kwento nganye engatshintshi xa ubona ezi grafu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 11 » Hayi, ii-iPhones ezindala azicothisi kwi-iOS 11
Umsebenzi awukhange uwele phantsi kodwa kuye kwakho ukuncipha. Kuyinyani ukuba i-iOS 11 yenza imisebenzi ethile esetyenziswa ngakumbi kwizixhobo ezintsha, yiyo loo nto siziva ngathi lo mahluko. Kodwa ndicinga ukuba konke oku kufuneka sikuxabise xa sinezibuyekezo ezimbini okanye ezintathu ezingaphezulu. Kwi-iPhone 6 ngoku ine-11.0.2 ihamba kakuhle kodwa uye kwi-iPhone 7 okanye 8 kwaye, ewe, ucinga ukuba yonke into yinkunkuma.
Ke i-iPhone 4 ayikhange ichaphazele ukusebenza kwe-iOS 7 …….
Ayisiyo yokuba uza kuxela amawaka ezikhalazo ezikwiforamu yeApple kwaye uxelele i-iPhone 6 yam ukuba ihamba njenge-esile elicothayo, iqhwa elincinci kunye nekhibhodi ethatha unyaka ukuba iphume
Idatha engenakulinganiswa ... kodwa ukuba andiqondanga kakuhle, iimvavanyo ze-CPU kunye ne-GPU zibhekisa ekusebenzeni kwe-iPhone ... Ngaba ikhona into enxulumene nebhetri?
Ndine-iphone 6 ethi nge-ios 10 ibicotha, kodwa ngoku ine-11 kunye nohlaziyo oluncinci olulandelayo lube yifowuni engathandekiyo ukuyisebenzisa, ukulibaziseka okude ukuvula izicelo, iihuku ezingapheliyo, ikhibhodi ecothayo ayicothanga kakhulu ...
Ke sukundixelela i-milongas.
Ndifana nawe ... Hehehe ios 9 kwi-iphone ne-ipad
Njengoko benditshilo kwinqaku endibhalileyo, iibhentshi ezinje ngolu vavanyo olunye lokuvavanya amandla esiphelo sendalo kwiindawo ezingalingisi ukusetyenziswa komsebenzisi.
Nangona ezi benchmark zithi amandla e-terminal ahlala efanayo, oko akuthethi nto, kuba i-firmware isenokungaphuculwa kakuhle, isiba mandundu ukusebenza kweetheminali ezindala.
Into ebonakala iyingozi kum kukuba awukwazi ukubuyela kwi-iOS 10, nokuba uyafuna. Eyona nto "inomdla" kukuba xa ukhalaza ngebhetri, kufuneka utshintshe iscreen, okanye enye into efuna uqwalaselo lomntu kwiVenkile zeApple, kuya kufuneka ufake uguqulelo lwe-iOS lwamva nje.
I-iPhone 6 yam iyangqubana nezi zibalo, ndiyayihlaziya kwi-iOS 11 kwaye ihamba kancinci, xa ndikhupha yonke ibhetri kwaye ndiyidibanisa ndiyitshaje ndisebenzisa itshaja yoqobo kuthatha imizuzu engama-20 ukuya kwengama-25 ukuvula. Ukuvula nje, ngaphandle kokuyisebenzisa, ukuqala kosuku nge-100% yetyala ngo-12 emini, sele ndinentlawulo engama-45%. Into efana nale yenzekile komnye umntu okanye ndingomnye wabambalwa abangafanelani nesitatisti ????
UPedro J sitsho
Kwelam icala, i-6Gb iPhone 16 Plus iyaqhubeka nokusebenza ngokufanelekileyo emva kokuhlaziya kwi-iOS 11, kwaye idreyini yebhetri iyahambelana ngokuhamba kwexesha lokusetyenziswa. Kukho iindlela endizikhethileyo kwi-iOS 10 ezinje ngoyilo, ubukhulu kunye nefonti, usetyenziso olufana neMozulu lubonisa ulwazi oluxineneyo, utshintsho xa uvula ifowuni lubonwa kancinci kancinci kwaye uyilo lwekhaltyuleyitha entsha alundithembisi, kodwa ezinye iindaba Zibonakala kum ukuba zihambele phambili ezinje nge "Driving" kunye ne "Emergency SOS" mode, kunye notshintsho kuyilo lweeSeto.
Njengoko bebonisile kwinkcazo yangaphambili, xa uhlaziya iApple Watch akukho kubuya mva, kwaye ukuba ufuna ukudibanisa i-iPhone kufuneka ibekhona kuhlobo lwamva nje lwe-iOS. Sele yenzekile kum ngomhla wayo xa bendine-iOS 9 ngeJailbreak engafakwanga, kuye kwafuneka ndihlaziye kwi-iOS 10 ukuze ndikwazi ukungqamanisa iwotshi kunye neselfowuni.
Imibuliso kunye nombulelo ku-Actualidad iPhone yamanqaku akho, bendilandela iwebhu ukusukela nge-3G XNUMXG yam yokuqala ukufika kwayo eSpain (kwaye ngendlela leyo "yayiqhotswe" kuhlaziyo lokugqibela lwe-iOS).
Phendula kuPedro J
Ndicinga ukuba awuzukusiqhatha ngezibalo, kuyinyani ukuba i-iPhone 6, endinayo, ayiyonto imbi, kodwa iyacotha nge-ios 11, lag kwi-appstore, kwikhibhodi, kwizicelo ezahlukeneyo, nkqu kwii-native
Kwabo benza kakubi, baxelele nje:
1) zingaphi iintsuku ezidlulileyo oyifakileyo iOS 11? Kungathatha iintsuku ezininzi ukugqiba isalathiso, ukuguqula, kunye nezinye izinto ezenzayo ngasemva ezenza ukuba ifowuni ibonakale icotha ekuqaleni kwaye ikhuphe ubomi obuninzi bebhetri. Emva kweentsuku ezimbalwa, ugqiba ukwenza izinto kwaye yonke into ihamba njengoko kufanelekile.
2) ukhe wazama ukufaka ios11 ukusuka ekuqaleni? Ndineengxaki xa kufakwa iinguqulelo ze-beta ze-iOS 10 kwaye xa inguqulelo yokugqibela yaphuma ndandibulala. Ndibuyisile kwasekuqaleni kwaye yonke into yaqala ukuhamba fancy. Nge-ios11 into inokwenzeka. Ukususela ekuqaleni nangaphandle kokubuyisela i-backup. Yonke into icocekile.
Ndilinde malunga neveki nge-OS 11 kwaye ndibuyele kwi-IOS 10.3.3 kuba ibhetri khange ilubone uphuculo kwaye NDIHLALA nditshintsha uhlobo lwe-IOS (yenombolo, oko kukuthi, ukusuka kwi-9 kuye kwi-10, ukusuka kwi-10 kuye kwi-11, njl. ...) Ndenza ukubuyiselwa okucocekileyo kwaye ndithanda i-iPhone entsha kwaye yayihamba njenge-esile.
Esinjani sona isithuko kubukrelekrele babanini be-iPhones 6 kunye 6S !!!
Kuya kwenzeka ukuba into eyenzekayo kukuba i-subconscious yethu isikhohlise ekubeni sikholelwe ukuba i-iPhone icotha kunokuba kubonakala ngathi sithenga entsha.
Kuthatha ixesha elingakanani ukubakho (ukulayishwa kwaye ukulungele ukusebenza) isicelo kwi-iPhone 6 ene-iOS 11 kwaye ithathe ixesha elingakanani nge-iOS10?
Ekhaya sine-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 kunye, iifowuni ezimbini azisebenzi njengaphambi kohlaziyo, kwaye obo bubungqina, iApple ingahlawula izigidi zabanye ukuba bathi akukho nto icwangcisiweyo, .
Uxolo, andivumelani nawe, kukho amakhulu amawaka ezikhalazo kwaye ayisiyongxaki leyo.
Ukuhlaziywa kwekhamera + ukuthatha iifoto ngokuzenzekelayo xa sincuma
I-Apple kwakhona ivumela ukwehla kwi-iOS 10.3.3 nge-iPhone 6s